थारु समुदायको माग संविधानमा समेट्न सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य : डा भट्टराई
टीकापुर । टीकापुर घटनाको ४ वर्ष पुगेकाे दिन (भदाै ७) पारेर थरुहट÷थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले टीकापुरमै थरुहट÷थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलन सुुरु गरेको छ । सम्मेलनमा देशभरका थारु, जनजाति अगुवा, पहिचान पक्षधर नेताहरुको बाक्लो उपस्थिति छ ।
३ दिनसम्म चल्ने कार्यक्रममा थरुहट÷थारुवान आन्दोलनको आगामी कार्यदिशा, संविधान संशोधनको लागि दवाव सिर्जनावारे रणनीति र टीकापुर राजबन्दीवारे बृहत छलफल हुने बताइएको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा सहभागी नेताहरुले थरुहट आन्दोलन उत्पीडनको उपज भएको अर्थ्याए । जसको निकासको लागि सशक्त भएर राज्यलाई दवाव सिर्जना गनुपर्ने र त्यतिले समेत नभए सशक्त आन्दाेलन गरेर भएपनि अधिकार हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रमको प्रमुख वक्ता समेत रहेका संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अहिलेको संविधान पूर्ण नभएको बताए । आफैले बनाएको संविधान भएपनि संविधान आधा पानी भरिएको गिलास जस्तै भएको उनले टिप्पणी गरे ।
सदियौंदेखि उत्पीडित थारु मधेशी, महिलालगायत उत्पीडित समुदायको माग अझै संविधानमा नसमेटिएकोले सशक्त आन्दोलन अपरिहार्य रहेको उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै, उनले उत्पीडित समुदायलाई दमन गरेर सद्भाव कायम नहुने बताउँदै भदौ ७ थारु समुदायको विद्रोह दिवस रहेको पनि उल्लेख गरे ।
नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका महासचिव मोहन वैद्य किरणले राज्यले तत्काल प्रतिनिधीसभा सदस्य रेशमलाल चौधरीलाई जेलमुक्त गनुपर्ने माग गरे ।
थरुहट आन्दोलन कुनै जाति विरुद्धको आन्दोलन नरहेको बताउँदै उनले पहिचानसहितको संघीयताको लागि थरुहट आन्दोलन रहेको र आफूहरुको पहिलैदेखि एक्येवद्धता रहेको नेता किरणको भनाई छ ।
यसैबीच थारु अगुवा सुरेन्द्र चौधरीले थारु बाहुल क्षेत्रको सीमांकन नगरिएसम्म वास्तविक सद्भाव कायम नहुुने ठोकुवा गरे ।
नेकपा नेता लेखराज भट्ट, भीम रावल, काँग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवा थरुहटका खलनायक रहेको आरोप लगाउँदै उनले अधिकारको लागि गरिएको भनिएको १० वर्षे जनआन्दोलनमा १७ हजार जनता मार्ने आन्दोलनका अगुुवा प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई पनि जेल जानुुपर्ने बताए । हैन भने आन्दोलन गरेकै भरमा अजीवन जेल जीवन बिताइरहेको रेशमलाल चौधरीलाई अबिलम्ब रिहाई गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण, पूर्व राजदूत विजय कर्ण, वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपाल, लेखक खगेन्द्र संग्रौला, काँग्रेस नेता सुरेन्द्र चौधरी, थरुहट नेता लक्ष्मण थारु, अधिवक्ता शंकर लिम्बु, समाजशास्त्री डा. ओम गुरुङलगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन भदौ ८ गते बन्दसत्र चल्ने छ भने तेस्रो तथा अन्तिम दिन भदौ ९ गते टीकापुर घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन सम्पन्न हुनेछ ।
भदौ ७ गते आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच दोहोरो झडप हुँदा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालक टेकबहादुुर साउदको ज्यान गएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट कफ्र्यु जारीको भएकै अवस्थामा भदौ ८ गते थारु समुदायको घर, पसल, एफएम गरी ८८ वटा भौतिक संरचनामा आगजनी भएको थियो ।